di Paolo Tescione - Ọgọstụ 1, 2020
Ga-asị ụbọchị ahụ: “Daalụ, Onyenwe anyị; I wesoro m iwe, ma iwe gi belatara, I wee kasie m obi. Le, Chineke bu nzọputam; Aga m atụkwasị obi, m gaghị atụ egwu, n'ihi na ike m na abụ m bụ Jehova; Ya onwe-ya bu nzọputam. You ga-eji ọ joyụ wepụta mmiri nke isi iyi nzọpụta. " N’ụbọchị ahụ, ị ​​ga-asị: “Keleenụ Jehova, kpọkuo aha Ya; Gosiputa ihe-ebube-ya n’etiti ndi nile di iche iche, kwuwa n’uwa na aha-ya bu ebube. Bụkuonụ Jehova abụ, n'ihi na O mewo oké ihe, Ihe a amawo n'ụwa dum. Tie mkpu ọ andụ na mkpu ọ ,ụ, unu ndị bi na Zaịọn: n'ihi na Onye Nsọ nke Israel dị ukwuu n'etiti unu ”.